အလောင်းပြန်ဖော် စစ်ဆေးနေသည့် မြန်မာအိမ်ဖော်သေဆုံးမှု သံသယဖြစ်ဖွယ် ထပ်မံတွေ့ရှိ – WunYan
အလောင်းပြန်ဖော် စစ်ဆေးနေသည့် မြန်မာအိမ်ဖော်သေဆုံးမှု သံသယဖြစ်ဖွယ် ထပ်မံတွေ့ရှိ
whuk-46651 | November 7, 2017 | Crime News | No Comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ရာ့ခ်ျပူရီခရိုင် ဘန့်ပုန်မြို့နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကျော်က ၁၇ နှစ်ရွယ် မြန်မာအိမ်ဖော်မိန်းကလေးတဦး သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့တဲ့အပေါ် ဖြစ်ရပ်မှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အုတ်ဂူဖျက်၊ အလောင်းပြန်ဖော်စစ်ဆေးရာမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှုခင်းဆေးဆရာဝန်ဘက်က လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေသလို တဘက်ကလည်း အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေအိမ်ကို ပြန်လည်သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုင်းအထူးမှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာအလုပ်သမားကူညီစောင့်ရှောက်ရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့ (အေအေစီ) တို့ဟာ သေဆုံးသူ မညိုညိုအေးဘက်က ထိုင်းရှေ့နေ၊ မိခင်နဲ့ အစ်မဖြစ်သူတွေနဲ့အတူ ဒီကနေ့မနက် ၁၀ နာရီကျော်က အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဘန့်ပုန်မြို့ ပါတ်လက်လမ်းရှိ အလုပ်ရှင်ရဲ့ နေအိမ်ကို နောက်ထပ်တဖန် သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီလို သွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာ သေဆုံးသူ မညိုညိုအေးမှ သူ့ကိုယ်သူ သေနတ်နဲ့ ပြန်ပစ်ပြီး သေကြောင်းကြံတဲ့ သရုပ်ပြကွက်တွေပါ ပါဝင်ပြီး ယုတ္တိမတန် မသင်္ကာစရာအချက်တွေ ထပ်မံတွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ထိုင်းရဲကိုယ်တိုင်က သေကြောင်းကြံတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထပ်မပြောနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အေအေစီအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ကိုရဲမင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“အဲဒီသူဌေးအိမ်ကို ပြန်သွားစစ်တော့ ပိုပြီးတော့ မသင်္ကာစရာတွေ တွေ့လာပါတယ်ခင်ဗျ၊။ နံရံက အကြည်ခန်းဖြစ်နေတာရယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမယ့်သူဟာ သူဌေးရဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ သတ်သေမှာပေါ့နော်. သူဌေးအခန်းက အကျယ်ကြီး လုံလည်းလုံတယ်၊ အပေါ်ထပ်ကို သီးသန့်ကြီး လှေခါးနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်တက်ပြီး သွားယူတယ်၊ ပြီးတော့ ဒီအောက်ထပ်မှာ လာပစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သုံးသပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျည်ဆန်ထွက်တဲ့ လမ်းကြောင်းက အရပ်မြင့်မြင့် ယောက်ျားတယောက်က သေနတ်ကိုင်ပြီး ပစ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်။
အစတုန်းက ထိုင်းရဲတွေက မိန်းကလေး ထိုင်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူပစ်သတ်တယ် ပြောထားတယ်။ အခုတော့ ထိုင်းရဲက စကားပြောင်းသွားပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေတယ်လို့ မပြောတော့ဘူး၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဒီအမှုကိုပြန်ကိုင်တဲ့ ရဲအရာရှိကို မေးတယ်။ ဒီအမှုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့အမှုလို့ ပြောလို့ရလားဆိုတော့ သူက ဟာ အဲလိုပြောလို့မရတော့ဘူး၊ ပုံစံပြောင်းသွားပြီလို့ ပြောတယ်။”
ဒါ့အပြင် မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ပစ်သတ်တယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်မှာ အန္တရာယ်မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ စက်ခလုတ်တွေပါ ပါရှိကြောင်း၊ မောင်းတင်ရာမှာလည်း အပေါ်ကိုပင့်ပြီး ကန်အားနဲ့မောင်းတင်ရတာကြောင့် ယောက်ျားတွေတောင် အတော်ဆွဲရတဲ့ သေနတ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရုံက အလောင်းရဲ့ ဦးခေါင်းကို သိပ္ပံနည်းကျ ခွဲစိတ်စစ်ဆေး ရာမှာလည်း ကျည်ဆန်က ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ပစ်လိုက်တဲ့ အနေအထားလို့ သုံးသပ်ရပြီး ကျည်ဆန်ဝင်သွားတဲ့ နေရာမှာလည်း အစက ညာဘက်ကနေ ၀င်တယ်လို့ ပြောထားရာက ဘယ်ဘက်ကနေ၀င်တယ်လို့ ရဲဆေးရုံက ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီအမှုတွဲပေါ်မှာ ထိုင်းရဲက မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း မျှော်လင့်ချက်ထားရှိပြီး ခုလောလောဆယ် ထိုင်း-မြန်မာသံရုံးက မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို သွားရောက် အကြောင်းကြားဖို့ အဲဒီကို သွားရောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်း ပုလောမြို့နယ်က ကရင်တိုင်းရင်းသူ မညိုညိုအေး (သေဆုံးသူ) နဲ့ အစ်မဖြစ်သူ မဖြူဖြူအေးတို့ဟာ ရာ့ခ်ျပူရီခရိုင် ဘန့်ပုန်မြို့ ဘန့်ပုန်ရပ်ကွက် ပါတ်လက်လမ်းရှိ နိုင်းကရိန်းဆဒ်ဒီ ဆီရီဝပ်ထနပရဆစ် ရဲ့ နေအိမ်မှာ ၂ နှစ်ကျော် အိမ်ဖော်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ သြ ဂုတ်လက အမဖြစ်သူက အဲဒီအိမ်က အလုပ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် ကျန်ခဲ့သူ ညီမက ဦးခေါင်းမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ ၂ ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မညိုညိုအေးသေဆုံးတဲ့အပေါ် သူ့အလုပ်ရှင်က အိမ်ဖော်ဖြစ်သူ သူ့ကိုယ်သူသတ်သေကြောင်း ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီး ရဲကလည်း စစ်ဆေးအတည်ပြုကာ အမှုကို ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျန်ရစ်သူမိဘဆွေမျိုးတွေက သူမသေဆုံးမှုပေါ် သံသယရှိကြောင်း၊ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို သိလိုကြောင်း အေအေစီအဖွဲ့ကို တိုင်ကြားခဲ့သလို အေအေစီအဖွဲ့ကလည်း ထိုင်း နိုင်ငံမှာ မြန်မာအိမ်ဖော်တွေ၊ အလုပ်သမားတွေ မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတွေ၊ အမှုဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်တာတွေ နောက်နောင်မဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက် အမှုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ လာဘ်စားမှုနဲ့ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲကို ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့ကာ ဂူသွင်းသင်္ဂြိုဟ်ပြီးတဲ့ အလောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလောငျးပွနျဖျော စဈဆေးနသေညျ့ မွနျမာအိမျဖျောသဆေုံးမှု သံသယဖွဈဖှယျ ထပျမံတှရှေိ့
ထိုငျးနိုငျငံ ရာ့ချြပူရီခရိုငျ ဘနျ့ပုနျမွို့နယျမှာ လှနျခဲ့တဲ့ ၃ လကြျောက ၁၇ နှဈရှယျ မွနျမာအိမျဖျောမိနျးကလေးတဦး သနေတျဒဏျရာနဲ့ သဆေုံးခဲ့တဲ့အပျေါ ဖွဈရပျမှနျ ပျေါပေါကျရေးအတှကျ အုတျဂူဖကျြ၊ အလောငျးပွနျဖျောစဈဆေးရာမှာ သံသယဖွဈဖှယျရာ ထပျမံတှရှေိ့ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
မှုခငျးဆေးဆရာဝနျဘကျက လိုအပျတဲ့ စဈဆေးမှုတှေ ဆောငျရှကျနသေလို တဘကျကလညျး အခငျးဖွဈပှားခဲ့တဲ့ နအေိမျကို ပွနျလညျသှားရောကျ စဈဆေးခဲ့ကွပါတယျ။
ထိုငျးအထူးမှုခငျးစုံစမျးစဈဆေးရေး ရဲတပျဖှဲ့၊ မွနျမာအလုပျသမားကူညီစောငျ့ရှောကျရေး မဟာမိတျအဖှဲ့ (အအေစေီ) တို့ဟာ သဆေုံးသူ မညိုညိုအေးဘကျက ထိုငျးရှနေ့ေ၊ မိခငျနဲ့ အဈမဖွဈသူတှနေဲ့အတူ ဒီကနမေ့နကျ ၁၀ နာရီကြျောက အခငျးဖွဈပှားခဲ့ရာ ဘနျ့ပုနျမွို့ ပါတျလကျလမျးရှိ အလုပျရှငျရဲ့ နအေိမျကို နောကျထပျတဖနျ သှားရောကျစဈဆေးခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီလို သှားရောကျစဈဆေးရာမှာ သဆေုံးသူ မညိုညိုအေးမှ သူ့ကိုယျသူ သနေတျနဲ့ ပွနျပဈပွီး သကွေောငျးကွံတဲ့ သရုပျပွကှကျတှပေါ ပါဝငျပွီး ယုတ်တိမတနျ မသင်ျကာစရာအခကျြတှေ ထပျမံတှရှေိ့ရတဲ့အတှကျ ထိုငျးရဲကိုယျတိုငျက သကွေောငျးကွံတယျဆိုတဲ့ အခကျြကို ထပျမပွောနိုငျလောကျအောငျဖွဈသှားတယျလို့ အမှုမှနျပျေါပေါကျရေး လိုကျပါဆောငျရှကျပေးနတေဲ့ အအေစေီအဖှဲ့ တာဝနျခံ ကိုရဲမငျးက ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။
“အဲဒီသူဌေးအိမျကို ပွနျသှားစဈတော့ ပိုပွီးတော့ မသင်ျကာစရာတှေ တှလေ့ာပါတယျခငျဗြ၊။ နံရံက အကွညျခနျးဖွဈနတောရယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသမေယျ့သူဟာ သူဌေးရဲ့ အခနျးထဲမှာပဲ သတျသမှောပေါ့နျော. သူဌေးအခနျးက အကယျြကွီး လုံလညျးလုံတယျ၊ အပျေါထပျကို သီးသနျ့ကွီး လှခေါးနှဈဆငျ့သုံးဆငျ့တကျပွီး သှားယူတယျ၊ ပွီးတော့ ဒီအောကျထပျမှာ လာပဈတယျဆိုတာ လုံးဝ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ သုံးသပျတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကညျြဆနျထှကျတဲ့ လမျးကွောငျးက အရပျမွငျ့မွငျ့ ယောကျြားတယောကျက သနေတျကိုငျပွီး ပဈလိုကျတဲ့လမျးကွောငျးဖွဈနတေယျ။
အစတုနျးက ထိုငျးရဲတှကေ မိနျးကလေး ထိုငျပွီးတော့ သူ့ကိုယျသူပဈသတျတယျ ပွောထားတယျ။ အခုတော့ ထိုငျးရဲက စကားပွောငျးသှားပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျသတေယျလို့ မပွောတော့ဘူး၊ ကနြျောကိုယျတိုငျ ဒီအမှုကိုပွနျကိုငျတဲ့ ရဲအရာရှိကို မေးတယျ။ ဒီအမှုကို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသတေဲ့အမှုလို့ ပွောလို့ရလားဆိုတော့ သူက ဟာ အဲလိုပွောလို့မရတော့ဘူး၊ ပုံစံပွောငျးသှားပွီလို့ ပွောတယျ။”
ဒါ့အပွငျ မိနျးကလေးက သူ့ကိုယျသူ ပဈသတျတယျလို့ ပွောထားတဲ့ ပစ်စတိုသနေတျမှာ အန်တရာယျမရှိအောငျ ထိနျးသိမျးတဲ့ စကျခလုတျတှပေါ ပါရှိကွောငျး၊ မောငျးတငျရာမှာလညျး အပျေါကိုပငျ့ပွီး ကနျအားနဲ့မောငျးတငျရတာကွောငျ့ ယောကျြားတှတေောငျ အတျောဆှဲရတဲ့ သနေတျမြိုးဖွဈကွောငျး၊ ဆေးရုံက အလောငျးရဲ့ ဦးခေါငျးကို သိပ်ပံနညျးကြ ခှဲစိတျစဈဆေး ရာမှာလညျး ကညျြဆနျက ခပျလှမျးလှမျးကနေ ပဈလိုကျတဲ့ အနအေထားလို့ သုံးသပျရပွီး ကညျြဆနျဝငျသှားတဲ့ နရောမှာလညျး အစက ညာဘကျကနေ ၀ငျတယျလို့ ပွောထားရာက ဘယျဘကျကနဝေငျတယျလို့ ရဲဆေးရုံက ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျတယျလို့ သူကဆကျပွောပါတယျ။
ဒီအမှုတှဲပျေါမှာ ထိုငျးရဲက မှနျကနျစှာ ပွနျလညျဆောငျရှကျပေးမယျလို့ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး မြှျောလငျ့ခကျြထားရှိပွီး ခုလောလောဆယျ ထိုငျး-မွနျမာသံရုံးက မွနျမာသံအမတျကွီးကို သှားရောကျ အကွောငျးကွားဖို့ အဲဒီကို သှားရောကျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
တနင်ျသာရီတိုငျး ပုလောမွို့နယျက ကရငျတိုငျးရငျးသူ မညိုညိုအေး (သဆေုံးသူ) နဲ့ အဈမဖွဈသူ မဖွူဖွူအေးတို့ဟာ ရာ့ချြပူရီခရိုငျ ဘနျ့ပုနျမွို့ ဘနျ့ပုနျရပျကှကျ ပါတျလကျလမျးရှိ နိုငျးကရိနျးဆဒျဒီ ဆီရီဝပျထနပရဆဈ ရဲ့ နအေိမျမှာ ၂ နှဈကြျော အိမျဖျောလုပျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ သွ ဂုတျလက အမဖွဈသူက အဲဒီအိမျက အလုပျထှကျခဲ့ပွီးနောကျ ကနျြခဲ့သူ ညီမက ဦးခေါငျးမှာ သနေတျဒဏျရာ ၂ ခကျြနဲ့ သဆေုံးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
မညိုညိုအေးသဆေုံးတဲ့အပျေါ သူ့အလုပျရှငျက အိမျဖျောဖွဈသူ သူ့ကိုယျသူသတျသကွေောငျး ရဲကိုအကွောငျးကွားပွီး ရဲကလညျး စဈဆေးအတညျပွုကာ အမှုကို ပိတျသိမျးလိုကျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကနျြရဈသူမိဘဆှမြေိုးတှကေ သူမသဆေုံးမှုပျေါ သံသယရှိကွောငျး၊ ဖွဈရပျမှနျကို သိလိုကွောငျး အအေစေီအဖှဲ့ကို တိုငျကွားခဲ့သလို အအေစေီအဖှဲ့ကလညျး ထိုငျး နိုငျငံမှာ မွနျမာအိမျဖျောတှေ၊ အလုပျသမားတှေ မတရားအနိုငျကငျြ့ခံရတှေ၊ အမှုဖုံးကှယျဖြောကျဖကျြတာတှေ နောကျနောငျမဖွဈပှားစဖေို့အတှကျ အမှုပွနျလညျစဈဆေးပေးဖို့ ထိုငျးနိုငျငံ လာဘျစားမှုနဲ့ အကငျြ့ပကျြဝနျထမျးတိုကျဖကျြရေး ရဲတပျဖှဲကို ပွနျလညျလြှောကျထားခဲ့ကာ ဂူသှငျးသင်ျဂွိုဟျပွီးတဲ့ အလောငျးကို ပွနျလညျတူးဖျောစဈဆေးနတော ဖွဈပါတယျ။
မန္တလေးတွင် လမ်းလျှောက်လာသည့် ဇနီးမောင်နှံကို ဖမ်းဆီးပြီး အမျိုးသမီးကို အုပ်စုလိုက် အဓမ္မကျင့်
ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာမှ ကားတစ်စီးလုံး မီးလောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄ ဦး မီးလောင် သေဆုံး
တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် အရေခွံခွာ နှာမောင်းဖြတ်ထားသော ဆင်သေတစ်ကောင် တွေ့ရှိ
၇ နှစ်အရွယ် ကလေးအား ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုပြပြီး သားမယားအဖြစ် ကြံစည်အားထုတ် သူအား ဖမ်းဆီး